အနောက်ဘက်တွင်ထိပ်ဆုံးလေးခေတ်မီလူသတ်သမား - သတင်း Rule
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “အနောက်ဘက်တွင်ထိပ်ဆုံးလေးခေတ်မီလူသတ်သမား” ရော်ဘင် McKie ကရေးသားခဲ့သည်, စနေနေ့6ဇွန်လအပေါ် Observer များအတွက် 2015 23.05 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ကင်ဆာဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲခေတ်သစ်ကာလ၏အကြီးမြတ်ဆုံးအသိဉာဏ်နှင့်လက်တွေ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုတဦးဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်. တစ်ဦးတရာလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း, ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံး၏အစောပိုင်းပုံစံများအားဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုခွဲစိတ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရေးဆရာဝန်များ၏စွန့်ပစ်ခြင်းမှာသာလက်နက်ခဲ့ကြ. ထိုကတည်းက, key ကိုတော်လှန်ရေးရဲ့အရေအတွက်ကပြောင်းလဲပြီ.
ပထမဦးဆုံးဓာတုကုထုံးများ၏နိဒါန်းခဲ့သည်, ဆင်းသက်လာခဲ့ကြကြောင်းမူးယစ်ဆေးဝါးပုံစံ, ရီစရာ, ပထမကမ္ဘာစစ​​်အတွင်းလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည့်မုန်ညင်းဓာတ်ငွေ့ကနေ. ဓာတ်ငွေ့သားကောင်များအပေါ်သူသခှေဲစိတျခွငျးထဲကအထမ်းသောဆရာဝန်များကဆဲလ်ဌာနခွဲ inhibited ကြောင်းမှတ်ချက်ပြု, နှင့် proliferating မှအကျိတ်ဆဲလ်များကိုရပ်တန့်ဖို့ကူညီပေးခဲ့ကြောင်းဗားရှင်းတီထွင်. ဤ 1950 ခုနှစ်အတွက်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကုသဖြစ်လာခဲ့သည်.
Genomics သုတေသနလုပ်ငန်း 20 ရာစုအတွင်းတိုးတက်အဖြစ်, သိပ္ပံပညာရှင်များအသစ်ကုသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ထိုအသိပညာကိုအသုံးပြုခဲ့ကြ. မကြာမီကတိုးတက်လာထည့်သွင်းခဲ့ကြ ပစ်မှတ်ထားကုထုံး. သူတို့အထူးသဖြင့်ကင်ဆာဆဲလ်များနှင့်ဆက်စပ်မော်လီကျူးပစ်မှတ်အပေါ်ပြုမူသောကွောငျ့ဤအမြင်းသရိုက်အနာတဘက်၌သူတို့လှုပ်ရှားမှု၌ သာ. သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိပါတယ်, အများဆုံးစံဆေးသွင်းကုသခြင်းအားလုံးလျှင်မြန်စွာခွဲဝေဆဲလ်တွေအပေါ်ပြုမူသော်လည်း, သူတို့ပုံမှန်သို့မဟုတ်ကင်ဆာဖြစ်.
ဥပမာအားဖြင့်, အကြောင်းတစ်ငါ​​းအတွက်ရင်သားကင်ဆာလူနာအတွက်, အကျိတ်ဆဲလ်များကို၎င်းတို့၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် HER2 အဖြစ်လူသိများနေတဲ့တိုးတက်မှုနှုန်း-မြှင့်တင်ရန်ပရိုတိန်း၏အလွန်အကျွံများ. ဒီပရိုတိန်း၏အလွန်အကျွံနှင့်အတူရင်သားကင်ဆာအထူးသဖြင့်ရန်လိုရှိပါတယ်, ကိုတွေ့သိပ္ပံပညာရှင်များ. မူးယစ်ဆေးဝါးတစ်ဦးကအရေအတွက်, ထိုကဲ့သို့သော Herceptin အဖြစ်, ဒီပရိုတိန်းပစ်မှတ်ထားနှင့်အကျိတ်ဆဲလ်ပြန့်ပွားပိတ်ဆို့ဖို့တီထွင်ခဲ့ကြ. ဤရွေ့ကားကိုပစ်မှတ်ထားကုထုံးယခုကင်ဆာဆန့်ကျင်စစ်တိုက်ရာတွင်တစ်ဦးအဓိကဖြစ်ကြောင်း.
ဂရိတ်တိုးတက်မှုလုပ်နေပါသည်, ဒါပေမယ့်ထွန်းသစ်စပြဿနာမဟုတ်ဘဲနည်းပညာပိုင်းထက်ဘဏ္ဍာရေးဖြစ်စေခြင်းငှါ. ဖွံ့ဖြိုးခံရမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏မျိုးဆက်သစ်အရမ်းစျေးကြီးတယ်, တတ်နိုင်၏မေးခွန်းများကိုပြုစုပျိုးထောင်.
၏သစ်စတဲ့နည်းပညာကိုယူ immunotherapy. ကင်ဆာဆဲလ်သည် T-ဆဲလ်ဖွားယောကလျှို့ဝှက်ချက်ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေတဲ့မျိုးအပိုင်, ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ Anti-ရောဂါကာကွယ်ရေး၏အဓိကအစိတ်အပိုင်း, သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ရန်မဟုတ်. 1990 ခုနှစ်တွင်, သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ဤလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်၏အစိတ်အပိုင်းခဲ့သည်ကို T-ဆဲလ်အပေါ်တစ်ဦးမော်လီကျူးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ. ဒါဟာပရိုဂရမ်အသေခံအဖြစ်လူသိများသည် 1 (PD1) နှင့်, သူ့ရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကတည်းက, သုတေသီများဟာသူ့ရဲ့ function ကိုနှောင့်အယှက်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ကြ.
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကချီကာဂိုအတွက်ထုတ်ဖော်ပြအသစ်မူးယစ်ဆေးဒီအလုပ်၏ရလဒ်ဖြစ်ကြောင်း. အဆင့်မြင့်စွာ melanoma နှင့်အတူလူနာအပေါ်စမ်းသပ်မှု, သောမြင့်မားသေဆုံးနှုန်းရှိပါတယ်, ပြီးသားအားတက်စရာရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်ကြပြီ, ဒါပေမဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေတချို့လူနာတွေအတွက်လေးနက်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိနိုင်တယ်လို့သတိပေး.
စိတ်ဖောက်ပြန်အမှန်တကယ်ရောဂါမဟုတ်ပါဘူး. ဒါဟာအများအပြားကွဲပြားခြားနားတဲ့အခွအေန၏ရလဒ်ကိုဖြစ်ပါသည်. အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါဤအသုံးအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမယ့်အခြားသူများကိုသွေးကြောနှောက်နှင့် frontotemporal နှောက်ပါဝင်. ဤအပုံစံများအားလုံးသည်ဘုံလက္ခဏာတွေဝေမျှ, သို့သော်. အဆိုပါ memory ဆုံးရှုံးမှုပါဝင်, ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအပြောင်းအလဲ.
စိတ်ဖောက်ပြန်ဆက်ဆက်ဟောင်းရတဲ့၏တစ်ဦးလွှဲမရှောင်သာရလဒ်မဟုတ်ပါဘူးနေစဉ်, ခြောအခွအေနဖွံ့ဖြိုးဆဲများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအသက်အရွယ်နှင့်အတူတိုးပွါး. ထို့ကြောင့်, ကူးစက်ရောဂါများကိုဗြိတိန်တွင်နှိမ်နင်းခဲ့ပြီးခဲ့ကြသည်အဖြစ်, နှင့်ကင်ဆာနှင့်နှလုံးအခွအေနအဘို့အသေဆုံးမှုနှုန်းထားကိုဆင်းအတင်းအဓမ္မ, ပို. ပို. လူဟောင်းအသက်အရွယ်အသက်ရှင်နိုင်ပါပြီ. (ဗြိတိန်တွင်သက်တမ်းသည်ယခု 79 လူတို့သညျအဘို့နှင့် 83 မိန်းမတို့အဘို့။)
ယနေ့တွင်, ဒါကြောင့်ယခုထက် ပို. ရှိပါတယ်တွက်ချက်သည် 850,000 ဗြိတိန်တွင်နှောက်နှင့်အတူလူ.
အားဖြင့် 2025, UK မှာစိတ်ဖောက်ပြန်မှုများ၏အရေအတွက်ထက်ပိုမိုမြင့်တက်လာရန်မျှော်လင့်နေသည် 1 သန်း. အားဖြင့် 2050, ကကျော်လွန်ဖို့စီစဉ်ထားပြီး2သန်း. ဖြည့်စွက်ကာ, အခွအေနအမျိုးသမီးများအတွက်အထူးသဖြင့်ဘုံဖြစ်တွေ့ခဲ့. ၏ 850,000 ဗြိတိန်မှာစိတ်ဖောက်ပြန်လူနာ, 500,000 အမျိုးသမီးများမှာ. ရလဒ်အနေဖြင့်, ကျော်အမျိုးသမီးများ 60 ယခုရင်သားကင်ဆာအဖြစ်နှောက်ရဖို့နှစ်ကြိမ်အဖြစ်များပါတယ်.
သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ယခုနှောက်၏အမျိုးမျိုးသောပုံစံများများ၏အသေးစိတ်အကြောင်းတရားများကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်မျိုးဗီဇနှင့်ပင်စည်ဆဲလ်နည်းပညာများကိုသုံးစွဲဖို့နည်းလမ်းတွေအပေါ်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်နှင့်, ရေရှည်, အခွအေနကွောငျ့ထိခိုကျသူတို့အားစှမျး၏ဆုံးရှုံးမှုကိုနှေးကွေးနိုင်ကြောင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့.
သို့သော်နှောက်နှင့်အတူဖြစ်ပျက်မမူ, မဿဲက Norton ကပြောပါတယ်, အဘို့မူဝါဒ၏ဦးခေါင်းကို အယ်လ်ဇိုင်းမားသုတေသနဗြိတိန်နိုင်ငံ. "ရုံကိန်းဂဏန်းများကိုကြည့်ရှု,"ဟုသူကဆိုသည်.
ဗြိတိန်မှာ "စုစုပေါင်းသုံးစွဲ – အလှူအတန်းနှင့်အစိုးရမှ – အတွက်စိတ်ဖောက်ပြန်ပေါ် 2013 £ 73.8m ခဲ့သည်. နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်, ကင်ဆာများအတွက်, ကကိန်းဂဏန်း£ 503m ခဲ့သည်။ "ဒီရန်ပုံငွေချို့တဲ့လျှော့လူအင်အားကိုဆိုလိုသည်, ကင်ပိန်းလှုပ်ရှားသူများကပြောပါ. အချို့ရှိပါတယ် 3,600 ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နှောက်သုတေသီများ -about 19,000 ကင်ဆာအပေါ်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူတို့အားထက်နည်းပါးလာ, နှောက်ကိုဗြိတိန်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးကိုပိုပြီးကုန်ကျသော်လည်း. ဒါကြောင့်, နှောက်နဲ့ဆက်စပ်စှမျး၏ဆုံးရှုံးမှုကိုနှေးကွေးသို့မဟုတ်ရပ်တန့်ဖို့ကုသရှာဖွေတာ၏အလားအလာကန့်သတ်ခံရလိမ့်မည်, သုတေသီများဆိုရ.
ဓါတ်ပုံ: PASIEKA / SPL / Getty Images / ကုန်အမှတ်တံဆိပ် X ကို
အတိတ်ကျော် 50 နှစ်ပေါင်း, ဗြိတိန်မှာနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါမှသေဆုံးမှုနှုန်းထားတစ်ခုအထင်ကြီးတိုးတက်မှုရှိခဲ့. ဒီအချက်အတိအကျပတေရုသ Weissberg ကချုပ်ဖော်ပြခဲ့သည်, ၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူး British Heart Foundation. "ဒီအခြေခံအုတ်မြစ်၌တည်ခဲ့သည် 1961, နှလုံးရောဂါတိုင်းပြည် ravaging သောအခါ. ဒါဟာအဲဒီနှစ်ထဲမှာဗြိတိန်တွင်အားလုံးသေဆုံးမှုထက်ဝက်ခန့်စေ၏။ "
အမှန်အတိုင်းလက်ခံနှင့်အတူ, ဒါဟာဘာကြောင့်ကြည့်ရှုရန်ခက်ခဲသည်မဟုတ်. ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းအဆင့်ဆင့်ကယနေ့ထက်လေးဆပိုမိုမြင့်မားခဲ့ကြ, ပြည့်နှက်အဆီမြင့်မားသောအစားအစာများကိုစားခြင်းနေစဉ် – မြေတပြင်လုံးနို့, ထောပတ်နဲ့အနီရောင်အသား – ထိုစံခဲ့သည်.
ယနေ့တွင်, သူတို့အားအစားအစာများကိုအနိမ့်အဆီရွေးချယ်စရာဖြင့်အစားထိုးခဲ့ကြ, ဟင်းသီးဟင်းရွက်အဆီများ, နို့နှင့်ကြက် skimmed. ကျွန်တော်တို့ဟာသွေးဖိအားနဲ့လက်စထရောအဆင့်ကိုလျှော့ချဖို့ဆေးဝါးများ, နှင့်အဓိကခွဲစိတ်ကုသခြင်းမရှိဘဲပိတ်ဆို့သို့မဟုတ်ကျဉ်းသွေးကြောဖွင့်လှစ်ရန်ဖြစ်နိုင်သမျှက.
ပျက်စီးသွားသောစိတ်နှလုံးကိုဆက်ဆံဖို့မူးယစ်ဆေးဝါးများကြံစည်အဓိကပြဿနာကနေကြုံတွေ့နေကြရသည်: သူတို့စမ်းသပ်ဖို့ခက်ခဲ. "ကျနော်တို့ကနှလုံး-တစ်ရှူးနမူနာကိုဖယ်ရှားဖွင့်လူနာဖြတ်တောက်မထားနိုင်. ဒါကပဲလက်တွေ့ကျတဲ့သို့မဟုတ်ကျင့်ဝတ်မဖြစ်,"ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham တက္ကသိုလ်က Chris Denning ကပြောပါတယ်.
မကြာသေးမီနှစ်များတွင်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာများအတွက်ဖြေရှင်းနည်းကို stem ဆဲလ်များအသုံးပြုခြင်းမှဖွင့်ဖို့ခဲ့. ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham တက္ကသိုလ်မှသုတေသီများကလူနာ '' အသားအရေမှဆဲလ်တွေယူကြပြီနဲ့ပင်စည်ဆဲလ်များထဲသို့သူတို့ကိုအသွင်ပြောင်းနိုင်ရန်အတွက်အာဟာရ၌သူတို့ကိုချိုး, မည်သည့်တစ်သျှူးသို့လှည့်နိုင်ဆဲလ်အမျိုးအစား. ဤရွေ့ကားဆဲလ်ထို့နောက်သို့တီထွင်နေကြပါတယ် နှလုံးဆဲလ်, သော Petri ဟင်းလျာများအတွက်ထားရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း စမ်းသပ်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်များအတွက်.
"ဒါကသူတို့အပေါ်သစ်ကိုမူးယစ်ဆေးကြိုးစားနေများအတွက်စံပြဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုသည်. ဒါဟာတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အရေးကြီးသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဖြစ်ပါသည်,"Denning ဆက်ပြောသည်.
အခြားသိပ္ပံပညာရှင်တွေကတိုက်ရိုက်ပြုပြင်ရေးအတွက်ကို stem ဆဲလ်တွေသုံးစွဲဖို့ဖြစ်နိုင်စေခြင်းငှါယုံကြည်, မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလ၌ပျက်စီးစိတ်နှလုံးကို.
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါမှခံစားသူမြား၏ဘဝချွေတာဘို့အလားအလာတိုးတက်လာဖို့ဆက်လက်ပေမယ့်, ဤအကြိုးခံစားခှငျ့ကိုထေမိရန်ခြိမ်းခြောက်ကြောင်း epidemiological ကိစ္စရပ်များကိုတစ်အိမ်ရှင်ရှိပါတယ်.
ဥပမာအားဖြင့်, ဆေးလိပ်သောက်နှုန်းအကြားသိသိသာသာကျဆင်း 1972 နှင့် 1994 ဒါပေမဲ့ကျဆုံး-off ကိုဆင်းနှေးကွေးခဲ့သည်ကတည်းက. ထိုအခါလေးလံသောအရက်သောက်၏ပျံ့နှံ့မှု 1970 ကတည်းကသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားမထားပါဘူး. ပိုဆိုးတာက, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအဝလွန်နှစ်လယ်ပိုင်း 1980 ကတည်းကယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများနှစ်ဦးစလုံးအတွက်တိုးပွားလာခဲ့, ဗြိတိန်တွင်ဆီးချိုရောဂါ၏ဖြစ်ပွားမှုဖြစ်သကဲ့သို့ - အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဝလွန်မှုနှုန်းလည်းမြင့်တက်ဆက်လက်နေစဉ်. ဤသူအပေါင်းတို့သည်အချက်များနှလုံးရောဂါသေဆုံးမှုနှုန်းများမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်၌နောက်တဖန်မထနိုင်တော့သောစွန့်စားမှုတိုးမြှင့်.
Weissberg ကဤအချက်များ "ငါတို့ယခုကြုံနေရသောနှလုံးရောဂါနှင့်သေဆုံးမှုနှုန်းအတွက်လျော့ကျလာခေတ်ရေစီးကြောင်းလွဲသွားစေရန်ခြိမ်းခြောက်က" သတိပေးလိုက်သည်.
ဓါတ်ပုံ: SCIEPRO / Getty Images / ကုန်အမှတ်တံဆိပ် X ကို
"တကယ်တော့, တီဘီကနေသေဆုံးမှုနှုန်း, တစ်ဦး pernicious လူသတ်သမား, နှစ်လယ်ပိုင်း 19 ရာစုအားဖြင့် drop မှစတင်ခဲ့,"မန်ချက်စတာတက္ကသိုလ်မှ Carsten Timmermann ကပြောပါတယ်. "ထဲမှာ 1838, ပတ်ပတ်လည်ရှိကြ၏ 4,000 တီဘီ၏ရလဒ်အဖြစ်သန်းနှုန်းသေဆုံးမှု, ဒါပေမဲ့ဒီပတ်ပတ်လည်မှကျဆင်းသွားခဲ့ 1,000 အားဖြင့် 1900. ကာကွယ်ဆေးနှင့်ပဋိဇီဝဆေးများကနဲ့ဘာမှခဲ့. တကယ်ပါပဲ, ကျဆင်းမှုမှာအားလုံးဖြစ်ပွားခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး. သို့သော်ထိုသို့သောအဘီစီဂျီကာကွယ်ဆေးစီမံကိန်းကိုအဖြစ်အစီအစဉ်များကိုတကယ် 20 ရာစုအလယ်အားဖြင့်တစ်ဦးလေးနက်သောလူသတ်သမားဖြစ်ခြင်းတီဘီရောဂါရပ်တန့်ခဲ့ကြောင်းကိုလည်းထင်ရှားဖြစ်၏။ "
အနောက်ဘက်တွင်, အများဆုံးကူးစက်ရောဂါများကိုယခုဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာသိုထားလျက်ရှိ. သို့သော်, ချိန်ခွင်လျှာတစ်ဦးကအောတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. "1960 ခုနှစ်မှာ, အမေရိကန်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်-ယေဘုယျကူးစက်ရောဂါများကိုလုံးဝရှုံးနိမ့်ခဲ့ကြောင်းအရေးဆိုဖို့စွပ်စွဲခဲ့သည်,"ဂျယ်ရမီ Farrar ကပြောပါတယ်, ဗြိတိန်နိုင်ငံ Wellcome Trust ၏ဦးခေါင်းကိုအဘယ်သူသည်.
"ဒီဇာတ်လမ်းပေါစေခြင်းငှါဒါပေမယ့်ဆက်ဆက်အချိန်သဘောထားများဖော်ပြလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်. ထိုအခါ, ဆယ်စုနှစ်များစွာ၏စုံတွဲတစ်တွဲနောက်ပိုင်းတွင်, ကျနော်တို့အနောက်ဘက်တွင် HIV ပိုး၏ဆိုက်ရောက်ခြင်းနှင့်ကူးစက်ရောဂါများ၏အစဉ်အဆက်-ပစ္စုပ္ပန်အန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်. အလွန်ရှင်းလင်းသောသငျခနျးစာကိုရှိခဲ့တယ်, အရာ အလွန်လျင်မြန်စွာပြန့်နှံ့နိုင် ကမ္ဘာ၏အခြားဒေသများမှ။ "
ဖြည့်စွက်ကာ, ပဋိဇီဝဆေးယဉ်ပါး၏မြင့်တက်လာ – ရလဒ်, အစိတ်အပိုင်းအတွက်, ကွူးခွငျးကွောငျ့၏ – ကူးစက်ရောဂါဆန့်ကျင်အနောက်ဘက်ရဲ့အဓိကသော့ချက်ကာကွယ်ရေးတယောက်မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်၌ရှုံးနိမ့်စေခြင်းငှါကြီးထွားလာစိုးရိမ်မှုတွေမှဦးဆောင်ခဲ့သည်, ဆေးဝါးကုမ္ပဏီများကအသစ်ဗားရှင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအရှိန်မြှင့်မဟုတ်လျှင်.
တစ်ဦးပိုမိုချိတ်ဆက်ကမ်ဘာတှငျ, ကူးစက်ရောဂါများမဆံ့ဖို့ ပို. ပို. ခက်ခဲင်. မြင့်တက်ပင်လယ်အဆင့်ဆင့်သို့မဟုတ်ဖြန့်သဲကန္တာရကြောင့်ထိခိုက်ဒေသများမှရာသီဥတုပုံစံများနှင့်တိုးမြှင့်ပြောင်းရွှေ့အတွက်အပြောင်းအလဲများလည်းအသစ်သောရောဂါများသို့မဟုတ်အနောက်ဘက်တွင်ရောက်ရှိလာသောလက်ရှိအခြေအနေသစ်ကိုပိုး၏အန္တရာယ်ကိုပြင်းထန်လာလိမ့်မည်.
"လူအမျိုးမျိုးဖွံ့ဖြိုးဆဲခုနှစ်တွင်, အဲဒီလိုဆီးချိုနဲ့အဝလွန်အဖြစ်ကနျြးမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်အတူကူးစက်ရောဂါပြဿနာတွေနဲ့အစားထိုးခဲ့ကြ,"Farrar ကပြောပါတယ်. "ဒါပေမယ့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင်, သူတို့နေဆဲကူးစက်ရောဂါများနှင့်အတူအဓိကပြဿနာများရှိသည် – ငှက်ဖျား, တီဘီနှင့် HIV, ဥပမာအားဖြင့် – ဒါပေမယ့်လည်းအဝလွန်ခြင်းနှင့်ဆီးချိုရောဂါကြောင့်ထိခိုက်လျက်ရှိသည်. ဤကဲ့သို့သောနိုင်ငံများ – ဗီယက်နမ်ဟာဥပမာကောင်းဖြစ်ပါသည် – ထိုကဲ့သို့သောကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အဖြစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအေဂျင်စီများမှစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအကူအညီလိုအပ်. သို့သော်, ဤအအေဂျင်စီများသူတို့နောက်တဖန်အနောက်မျက်နှာမှလိုအပ်သည့်ထောက်ခံမှုရတဲ့ကြသည်မဟုတ်။ "
36593	0 အပိုဒ်, ကင်ဆာ, စိတ်ဖောက်ပြန်, မူးယစ်ဆေးဝါး, အင်္ဂါရပ်များ, နှလုံးရုတ်တရက်ဖောက်ပြန်မှု, အာရုံထဲမှာ, ကူးစက်ရောဂါများ, အဓိကအပိုင်း, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနများ, ဆေး, စိတ်ကျန်းမာရေး, အဏုဇီဝဗေဒ, NHS, ရော်ဘင် McKie, သိပ္ပံ, အဆိုပါ Observer
← နယူးစမ်းသပ်မှုဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု၏တစ်ခုလုံးကိုသမိုင်းကိုဖေါ်ပြဖို့အသှေးကိုတစ်ခုတည်းကျဆင်းမှုကိုအသုံးပြုသည် လေ့လာမှုအသစ်တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်စိတ်မကျန်းအကြားမျိုးရိုးဗီဇ link ကိုရှာတွေ့မှဆိုပါတယ် →